YouTube ကလေးငယ်များ APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
YouTube ကလေးငယ်များ APK ကိုဒေါင်းလုပ်
A world of လေ့လာနေ နှင့် နှစ်သက်ဘွယ်သော, made only for လူငယ်
We created YouTube Kids to make it safer and easier for youths သို့ ရှာဖှေတှေ့ ကမ္ဘာကြီးကို အားဖြင့် On-line ကို video – from their အကြိုက်ဆုံး ထုတ်ဖော်ပြသ and music to လေ့လာနေ tips on how to တည်ဆောက် တစ်ဦး mannequin volcano (သို့မဟုတ်ရေညှိစေ ;-), နှင့် the whole lot ကြား၌. There’s ဒါ့အပြင်acomplete suite of parental controls, ဒါကြောင့် သငျသညျဖြစ်နိုင်သည်နိုင် tailor the ကျွမ်းကျင်မှု သို့ your loved ones'' s ကို wants.
A safer On-line ကို ကျွမ်းကျင်မှု for youths
We useamixture of filter များ, စားသုံးသူ အကြံပြုချက်များ and human reviewers ထိန်းသိမ်းထားဖို့ အဆိုပါ ရုပ်ရှင်တွေ in YouTube Kids အိမ်ထောင် သာယာသော. သို့သျောလညျး no system is ideal and inappropriate ရုပ်ရှင်တွေ can slip အားဖြင့်, so we’re consistently အလုပ်လုပ်ကိုင် မြှင့်တင်ရန် our safeguards and provide အပို ရွေးချယ်မှုများ to assist dad and mom create the correct ကျွမ်းကျင်မှု for his or her households.
ရယူ the inside track အပေါ် အဆိုပါအပေါငျးတို့သ စီမံခန့်ခွဲမှု ရွေးချယ်မှုများ လက်လှမ်း သင့်ဆီ:
ဖန်တီး သလောက် ရှစ် child profiles, every နှင့် their very own viewing preferences, ဗီဒီယိုက အကြံပြုချက်များ, နဲ့ settings တွေကို.
Discoveravideo or channel you don’t လိုအပ် သင့်ရဲ့ child to look at? Block it to robotically take away it from your entire လူငယ်’ profiles.
Alert us instantly by reporting ရုပ်ရှင်တွေ that shouldn’t be အတွင်းမှာ app ကို. The video ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည် despatched to us for လျင်မြန်သော evaluate.
Flip search on so လူငယ် can entry ကို အပို ရုပ်ရှင်တွေ. Flip search off foraအပို contained ကျွမ်းကျင်မှု.
စီစဉ်atimer to place limits on how lengthy သင့်ရဲ့ လူငယ် can play with the app.
Preserve tabs on what your လူငယ် are watching အတွင်းမှာ app ကို.
စုဝေး your loved ones and luxuriate in YouTube Kids on choose TVs
ဘို့ အပို ဒေတာ, သွားပါ လူငယ်.youtube.com.
Different vital ဒေတာ:
Parental setup is required to make sure အကောင်းဆုံး ကျွမ်းကျင်မှု doable သင့်ရဲ့အတွင်း child.
YouTube Kids incorporates paid ကြော်ငြာ so as to provide the app for free. သင့်ရဲ့ child may additionally မြင် ရုပ်ရှင်တွေ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အကြောင်းအရာပစ္စည်း from YouTube creators that aren’t paid ကြော်ငြာ.
Vital ဒေတာ for folks နှင့် Household Hyperlink Google accounts.
You possibly can create Google Accounts for youths underneath the age of 13 တွင် Household Hyperlink. သင့်ရဲ့ လူငယ် can signal ကို into YouTube Kids with their Google Account. You possibly can entry ကို parental settings အတွင်းမှာ Household Hyperlink app and ခွင့်ပြု an extra အကြောင်းအရာပစ္စည်း ဒီဂရီ setting in our app. Decide into an “older” setting if you happen to တကယ်ခံစားရ သင့်ရဲ့ child is prepared ဘို့ အများကြီးလျော့နည်း restricted ရုပ်ရှင်တွေ. These ရုပ်ရှင်တွေ ခွန်အား comprise အချို့သော တိကျတဲ့ language and imagery, violence and suggestive အကြောင်းအရာပစ္စည်း. လည်းပဲ, this setting tries to exclude mature အကြောင်းအရာပစ္စည်း, သို့သော် no automated system is ideal and your child ခွန်အား ရှာဖှေတှေ့ အကြောင်းအရာပစ္စည်း with nudity, အလွန် offensive language, နှင့် ပိုမိုသော violence.
အဆိုပါ ကိုယ်ပိုင် ရှာဖှေတှေ့ for Google Accounts created in Household Hyperlink describes our ကိုယ်ပိုင် practices when your child အသုံးပြု YouTube Kids with their Google Account. When your child အသုံးပြု YouTube Kids ထွက်နှင့်အတူ signing into their Google Account, the YouTube Kids ကိုယ်ပိုင် ရှာဖှေတှေ့ applies.
YouTube Kids Google က LLC အားဖြင့်
YouTube ကို VR APK ကိုဒေါင်းလုပ်
Google Chrome က: လျင်မြန်စွာ & APK ကိုဒေါင်းလုပ် Secure
အန်းဒရွိုက်တီဗီ .apk ဒေါင်းလုပ်များအတွက် YouTube ကလေးများ
Google Account သို့ Manager ကို .apk ဒေါင်းလုပ်
Google ပင်မ APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ပုံစံ: သုံး.36.2 (93602130)
ဗိုလ်လုပွဲ နောက်ဆုံးပေါ်: ဇူလိုင်လ 20, 2018
ဖိုင်မှတ်တမ်း တိုင်းတာခြင်း: 55 mb
YouTube Kids သုံး.27.15 .APK ကို
DiskDigger ဓါတ်ပုံကိုပြန်လည်နာလန်ထူ APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
WhatsApp ကို Messenger ကိုအန်းဒရွိုက် APK ကို v2.11.432
Sword Art Online အတွက်ပေါင်းစည်းထား Factor APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
ယူရို Truck ကားယာဉ်မောင်း 2018 APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
TPlayer APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
PPSSPP PSP emulator APK ကိုဒေါင်းလုပ် | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
အသီး Ninja APK ကိုဒေါင်းလုပ် Fight | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Mozilla SeaMonkey 2.49.4 ဘာသာပေါင်းစုံ
TEKKEN APK ကိုဒေါင်းလုပ် | သည်အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
အဘယ်သူမျှမကန့်သတ် APK ကိုဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းဘို့လိုအပ်ပါတယ်…
အန်းဂရီးဘားဒ်စ်2APK ကို 2.19.1 Android အတွက်…
ဟယ်ရီပေါ်တာ: Hogwarts နက်နဲသောအရာ APK ကိုဒေါင်းလုပ် – …
NVIDIA SHIELD တီဗီ APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး…
YouCam ပြီးပြည့်စုံသော – selfie ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ APK ကို…
Pokemon GO .apk ဒေါင်းလုပ်များအတွက်တိုက်ရိုက် Poke…